Warshadaha Meelaynta Soo koraya | Martech Zone
Warshadaha Meelaynta Koraaya
Axad, Nofeembar, 20, 2011 Axad, Nofeembar, 20, 2011 Douglas Karr
Wax soo saarka Apple ayaa ka soo muuqday 30% oo ka mid ah 33ka filim ee ugu sarreeyay sanadkii 2010. Nike, Chevy iyo Ford oo soo baxay 24%. Sony, Dell, Land Rover iyo Glock oo ah 15%. Meelaynta Alaabtu waa warshad $ 25 bilyan hadda ah. Xaqiiqdii, filimka soo socda ee James Bond ayaa dabooli doona saddex-meelood meel meel miisaaniyadda iyada oo $ 45 milyan dakhliga meelaynta alaabta.
Pontiac wuxuu rajeeyay inuu iibiyo 1,000 Solstices 10 maalmood gudahood. Taabadalkeed waxay iibiyeen 1,000 Solstices mudo ah 41 daqiiqo kadib markii lagu soo bandhigay barnaamijka tababarka.
Maaddaama macaamiishu ay aad u sii adkaysanayaan ama ay u muuqdaan kuwo aan danaynayn xayeysiinta, istiraatiijiyado sida meelaynta wax soo saarka ayaa sii kordheysa. Isbarbar dhigga warshadaha filimku waa kafaalaqaadka warshadaha waxyaabaha ka kooban. Maaddaama horumariyayaashu ay dhisayaan awood ayna kordhiyaan dhagaystayaashooda, fursadda lagu kordhinayo dakhliga iyada oo la kafaala qaadayo ayaa dhiseysa Martech Zone kama duwana… Zoomerang iyo Delivra aad ayey muhiim ugu yihiin awooddeena inaan kusii wadno kobcinta iyo maalgashiga Martech. (Waxaan sidoo kale raadineynaa kafaala-qaadayaal dheeri ah sidoo kale, haddii aad xiiseyneyso).
Farqiga kaliya ee aan shakhsiyan u arko waa xeerarka federaalka ee la xiriira mid kasta. In kasta oo ay tahay inaan si guud u soo bandhigo xiriir kasta oo aan ku dhex leeyahay waxyaabaha aan qoreyno, warshadaha filimada kaliya waxay xusayaan xoogaa macluumaad ah dhamaadka filimka. Lacagta Hollywood-ka ee siyaasada ayaa runtii isbadal samaynaysa!
Dhisida dhagaystayaasha waxay qaadataa waqti iyo dadaal badan. Raadinta qof leh dhagaystayaashaas horeyba iyo shuraako lala yeesho waa bedel weyn. Boggan, waxaa lagama maarmaan ah in kafaala-qaadayaasheena ay noqdaan shirkado waa weyn tan iyo markii aan sumcaddayada qarinayno oo aan qatar u galineyno dhagaystayaasheena markii aan dhiirrigelinaynay. Ma aqaano in filimada ay khatar badan yihiin! Filim qarxiya daruuri maahan inuu hoos u dhigo sheyga ay xayaysiinayaan… iyo alaab nacas ah daruuri kama aha inuu ka qaado filimka.
Via: Talada MBA ee khadka tooska ah
Tags: meelaynta waxsoosaarka tufaaxaet meelaynta alaabtaHollywoodmeelaynta alaabta hollywoodinfographicmeeleynta james bondmeelaynta sheyga filimkameeleynta badeecadameelaynta alaabta sheekada toy
Maamulka Dhismaha ee Raadinta
Dib-u-Xusuusin Aan Sumcad Lehyn Oo La Xusuusto
Nov 21, 2011 saacadu markay tahay 5:59 PM
Jaangooynta Brand waa weyn tahay hadda. Meelaynta alaabta ayaa ka caawisay taas, waxaanan u maleynayaa inay sii kori doonto.